संस्कारयुक्त शिक्षाको अभियान - Pradesh Today संस्कारयुक्त शिक्षाको अभियान - Pradesh Today
संस्कारयुक्त शिक्षाको अभियान
बैशाख २४, २०७६ उमा भण्डारी
अहिले नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ । शिक्षण संस्थाहरुले शैक्षिक सत्रलाई विशेष रुपमा लिने गर्दछन् । आफ्नो शैक्षिक संस्थालाई अब्वल बनाउने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने प्रतिवद्धता सार्वजनिक भइरहेका छन् । नयाँ शैक्षिक सत्र र विद्यालयको सुधारको योजनाको बारेमा हाम्रो पहुँच सेकेन्डरी स्कुल तुलसीपुर–७, झुमरे, दाङका प्रिन्सिपल डि.आर. भण्डारी सँग गरिएको कुराकानीको सारसंक्षेप ।
हामीले विद्यालय स्थापनादेखि नै एउटा कुरामा निकै ध्यान दिएका छौँ त्यो भनेको सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने हो । हामी हरेक वर्ष यसै कुरालाई ध्यानमा राखेर योजना बनाएका हुन्छौँ ।
र यस वर्ष पनि कसरी सुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन सकिन्छ भन्ने कुराको योजना बनाएका छौँ । त्यसै अनुसारको पाठयोजना बनाएका छौँ । भौतिक पूर्वाधारलाई थप व्यवस्थित बनाउने साथै नयाँ प्रविधिलाई अंगालेर प्रविधियुक्त कक्षा बनाउने योजना पनि बनाएका छौँ ।
त्यसैगरी विद्यार्थीको क्षमता अनुसारको शिक्षा, थप भौतिक संरचना, मनोरम वातावरण, व्यवहारिक तथा संस्कारिक शिक्षाजस्ता कुरालाई अझ प्रभावकारी तरिकाले अगाडि लैजाने योजना बनाएका छौँ । एकमुष्टमा भन्दा विद्यार्थीहरुको लागि शिक्षा करलाग्दो नभएर साँच्चिकै रहर लाग्दो बनाउने योजना बनाएका छौँ ।
विद्यालयलाई आगामी दिनमा कसरी सञ्चालन गर्ने तयारी गरिरहनुभएको छ ?
हाम्रा विद्यार्थी कितावी ज्ञानमा मात्रै सीमित नभई व्यवहारिक ज्ञान पनि सिकून् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी हाम्रा विद्यार्थीको चौतर्फी विकास होस् भन्न चाहन्छौँ । विद्यार्थीमा Holistic Development हुनुपर्छ भनेर केन्द्रदेखि स्थानीयतहसम्म छलफल चलिरहेको छ ।
हामी पनि विद्यार्थीहरुमा Holistic Developmen हुनुपर्छ भन्नेमा छौँ र त्यसै अनुसारको थप पाठयोजना र पाठ्यक्रम बनाएर अगाडि लैजाने र विद्यार्थीहरुलाई त्यसै अनुसार व्यवहारमुखी बनाउने तयारी गरिरहेका छौँ ।
अन्य विद्यालय छाडेर यही विद्यालयमा विद्यार्थी पढ्न आउनुको कारण के ? कि विभिन्न सेवा सुविधाका शीर्षकहरुमा आश्वासन दिनुभएको छ र ?
अन्य विद्यालय छाडेर यहाँ आउनुको कारण त धेरै नै छन् । त्यसमध्ये पहिलो भनेको पढाइको गुणस्तर नै हो । गुणस्तर भयो भने कुनै आश्वासन दिनुपर्दैन । मैले पहिला पनि भने नि, सर्वसुलभ शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा भनेर, हामी त्यहि कुरामा अडिग छौँ ।
हामीले दिने शिक्षा कुनै पनि कारणले गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई मुल मन्त्र बनाएर राखेका छौँ र विद्यार्थीलाई कितावी ज्ञान सँगसँगै व्यवहारिक ज्ञान, सीप पनि सिकाउँछौँ ।
कतै कुनै सञ्चालकले गर्ला भए नभएका सुविधा दिन्छौँ भनेर विद्यार्थी ल्याउला तर त्यो भोलि गएर देखिहाल्छ नि ! हामी हुन नसक्ने कुराको आश्वासन देखाएर कहिलै त्यसो गरेनौँ । फेरी अहिलेको अभिभावक त्यस्तो कुराको भरमा भर्ना गर्ने पनि हुनुुहुन्न । त्यसैले आश्वासन देखाएर धेरै विद्यार्थी भर्ना हुन आउने भन्ने त कुरै भएन नि ।
हो, यो तपाईले भनेजस्तै शैक्षिक अभियान नै हो । शिक्षित समाज निर्माण गरी समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा हामी सबै एक भएर लागेको हो । सबैको लक्ष्य एउटै हो । हामीले त्यो लक्ष्यमा पुग्नका लागि बाटो फरक रोजेका छौँ, फरक त्यहि हो ।
आजैबाट हामीले बाबुनानीहरुलाई सशक्त बनाउने प्रयास गरेका छौँ । उनीहरुको बोलीमा आत्मविश्वास भरिदिएका छौँ ।
आफूले जानेको कुरा जहाँ पनि निडरतापूर्वक तरिकाले राख्न सकोस् भन्ने उद्देश्यले उनीहरुलाई उद्घोष गर्न सिकाएका छौँ । खेल क्षेत्रमा जिल्ला क्षेत्र हँुदै केन्द्रसम्म भिड्न सिकाएका छौँ ।
विभिन्न उनीहरुलाई राष्ट्रको बफादार नागरिक बनाउनको लागि आजैबाट समय सुहाउँदो वातावरण तयार पारेका छौँ । विभिन्न सिपमूलक प्रशिक्षण दिएका छौँ । कितावी ज्ञान सँगसँगै संस्कारसहितका अतिरिक्त ज्ञानका व्यवहारिक कुरा पनि सिकाएका छौँ ।
अहिलेका विद्यार्थीहरुमा व्यवहारिक संस्कार पनि हटेर गएको छ ? यसको संरक्षणमा तपाईको विद्यालयको भूमिका के ?
हो, मैले यही कुरालाई जोड्दै थिए तपाईले राम्रो कुरा उठाउनु भयो । अहिले आधुनिकताको नाममा हाम्रो संस्कार संस्कृतिमाथि चुनौती थपिएको छ । हामी अभिभावक पनि जानी नजानी अर्काको सिको गर्न खोजेका हुन्छौँ ।
जुन अहिलेका विद्यार्थीहरुमा विस्तारै सर्दै गएको पाइन्छ । तपाई हिन्दी टिभि सिरियलदेखि ईन्टरनेट फेसबुक अभिभावक हुँदै विद्यार्थीमा आएको छ । जसका कारण अहिले नेपालको मौलिक संस्कार हराउँदै गएको छ ।
हामी यो खतरादेखि निकै होसियार छौँ र यसलाई रोक्नुपर्छ भन्दै समय–समयमा अभिभावक अभिमुखीकरण तालिम राख्ने गर्दछौँ र अभिभावहरुलाई सचेत गराउने प्रयास गर्दछौँ ।
साथै हरेक दिन कक्षा शिक्षकले आफ्नो पाठ शुरु गर्नुभन्दा पहिला करिब पाँच मिनेट विद्यार्थीहरुलाई हामीले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन, एकअर्कामा गरिने सम्मान,
आदर, बाबुआमालाई गरिने माया, एकअर्कामा हुनुपर्ने सहयोग, राष्ट्रप्रतिको मायालगायतका विषयमा कक्षा दिदै आएका छाँै । त्यसका साथै नैतिक शिक्षा विषयलाई अनिवार्य विषय बनाई पठनपाठन गर्दै आएका छौँ ।
शैक्षिक जगतमा विद्यालय–विद्यालय बीच व्यापक प्रतिस्पर्धा छ, तपाईले आफ्नो विद्यालयलाई कसरी प्रतिस्पर्धामा ल्याउनुभएको छ ?
हो, एकअर्कामा प्रतिस्पर्धा हुनु राम्रो कुरा हो तर त्यो प्रतिस्पर्धा स्वस्थ्य हुनुपर्छ ।
तर बजारमा हामी धेरै ठाउँमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिरहेका छौँ । यो निकै डरलाग्दो काम हो । अरुसँग गरिने यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले पहिला आफैलाई अप्ठ्यारोमा पार्छ त्यसैले । स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्नु जरुरी छ र हामीले जहिले पनि स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा गर्दै गराउँदै आएका छौँ ।
विद्यालयमा पाठ्यपुस्तक र पाठ्यक्रमलाई कसरी व्यवस्थित गर्नुभएको छ ?
हामीले नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालयबाट तयार भई आएको पाठ्य विकास केन्द्र अनुसार मान्यता प्राप्त पुस्तकलाई नै ग्राह्यता दिएका छौँ र त्यसै अनुसारको पाठयोजनालाई तयार पारी पठनपाठन गराउँदै आएका छौँ । साथै विद्यार्थीलाई थप व्यवहारिक तथा सिपमूलक कक्षाका लागि थप पाठयोजना बनाई पठनपाठन गर्दै आएका छौँ ।
विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याइ पुग्दा अभिभावक तथा विद्यार्थी खुशी छन् त ?
एकदमै खुशी छन् । खुशी नभएको भए किन एघार सय विद्यार्थी पढन आउँथे र ?
हो, शैक्षिक संस्थामा विद्यार्थी भएर मात्रै हुँदैन उनीहरुलाई टिक्न र बिक्न सक्ने बनाउनु महङ्खवपूर्ण काम हो । यहाँलाई थाहै छ यो हाम्रो पहँुच सेकेन्डरी स्कुल हाम्रो पहुँच बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाको लगानीमा सञ्चालन भएको विद्यालय हो ।
हामी सदैव हाम्रो विद्यार्थीलाई विदेश जानेभन्दा पनि आफ्नै देशमा केही गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सिकाउने प्रयत्न गरेका छौँ ।
अहिले पनि हामीले पढाएका विद्यार्थीहरु इन्जिनियर, नर्सिङ, फरेस्ट्रीलगायतका तह तथा लोकसेवा आयोगले लिने परीक्षामा उत्तीर्ण भएका छन् । मैले अगाडि भने जस्तै हामीले यहाँ पढाउने विद्याथीलाई विभिन्न सिपमूलक तालिमहरु जस्तैः विद्युत घर जडान तालिम, करेसाबारी, मैनबत्ती उत्पादन, रेडियो उद्घोषण, जग्गा नाप्ने आधारभूत नापी तालिम, तमसुक लेखन,
गुडिया निर्माण, बस्नलाई प्रयोग गरिने मुढा निर्माणलगायतका तालिम सिकाएका छौँ । र केही विद्यार्थीले फुर्सदको समयलाई प्रयोग गरी यी सामाग्रीहरुलाई तयार पारी बजारमा ल्याएका छन् । तालिम सिकाइएका केही विद्यार्थीहरुले अहिले पनि रेडियोमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । हामीले यसलाई पनि एउटा उदाहरणको रुपमा मान्न सक्छौँ ।
अहिले विद्यालयहरुमा विकृति बढ्दै गएको छ । यसमा तपाईको भनाई के छ ?
शिक्षा देश विकासको मेरुदण्ड हो । देशमा संस्कारयुक्त शिक्षाको विकास भयो भने देश विकासले विकासको गति लिन्छ । र विद्यालय भनेको सदैव राम्रो कुरा सिकाउने थलो हो । यसमा कुनै पनि विकृति बढ्नु हुन्न ।
यदि स्कुलहरुमै विकृति बढ्दै जानथाल्यो भने देश बिग्रन्छ । त्यसैले सानो वा ठूलो जस्तो भएपनि विद्यालहरुमा विकृति बढ्न थालेको छ भने समयमै यसलाई निर्मूल गरिनुपर्छ ।
विद्यार्थीलाई प्रविधियुक्त शिक्षा प्रदान गर्नका लागि विद्यालयमा के कस्ता पूर्वाधारको व्यवस्था गरिएको छ ?
प्रविधियुक्त शिक्षाकै लागि भनेर अहिले कम्प्युटर कक्षालाई थप व्यवस्थित बनाएका छौँ । विद्यालयमा वाइफाईको व्यवस्था भएको छ भने प्रोजेक्टर कक्ष सञ्चालनका लागि प्रोजेक्टरलाई आवश्यक पर्ने थप उपकरहरु पनि खरिद भएका छन् ।
अहिलेको समयमा शिक्षकलाई आवश्यक पर्ने धेरै कुरा इन्टरनेटमा पाइन्छ । त्यसैले Teacher Id बनाएर शिक्षकलाई इन्टरनेटको पहँुचमा पु¥याएका छौँ । अब छिट्टै विद्यार्थी अभिभावहरुलाई पनि सहज हुने गरी नेटमा Student Id / Guardian Id बनाउने योजना भएको छ ।
लामो समयदेखि विद्यालयले शैक्षिक सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, यहाँसम्म आईपुग्दा विद्यालय सञ्चालनमा आउने कठिनाईलाई कसरी सुल्झाउँदै लैजानुभएको छ ?
धेरै कठिनाईहरु आए शुरुवातको दिनहरुमा अभिभावकको विश्वास पाउन निकै कठिन भयो तर जब विद्यालयले गुणस्तर प्रदान गर्न थाल्यो हामीलाई सहज भएको छ । अनावश्यक कुरा काट्नेहरुको पछि लागेनौँ आफ्नै मेहनतमा लागिरह्यौँ ।
मित्थ्या हल्लाहरु आफै सेलाउँदै गए । अभिभावकहरुको माया पाएका छौँ तपाइहरुजस्तो सचेत व्यक्तिहरुको सल्लाह र सुझावले विस्तारै सबै कठिनाईहरु सुल्झिदै गएका छन् । तै पनि समस्याहरु एकपछि अर्का गरी आइरहदो रहेछन् । समस्याहरुसँग सम्झौता होइन संघर्ष गर्न सकियो भने आफै समाधान भएर जादो रै’छ ।
म सम्पूर्ण अभिभावकलाई धन्यवाद भन्छु । आज यहाँहरुकै मायाले संस्थाले सफलता पाएको छ । यदि अन्य कुनै अभिभावक पनि हाम्रो यस विद्यालयमा बाबुनानीहरुलाई भर्ना गराई आफ्ना सन्तानको सुनौलो भविष्य निर्माण गर्न चाहनुहुन्छ भने आउनुहोस् हामी तपाईले देख्नुभएको तपाईका बाबुनानीहरुको सपना साकार पार्न कटिवद्ध भएका छौँ ।
साथै संस्थालाई यहाँसम्म ल्याउनलाई अहोरात्र खट्नुहुने सञ्चालन समिति उप समिति, शेयर सदस्य अनि आफ्नै बाबुनानीजस्तै स्याहार गरी सिकाउनु हुने शिक्षक तथा कर्मचारीहरु सबैमा धन्यवाद छ । र हाम्रा केही भनाई राख्न दिनुभएकोमा तपाईलगाएत तपाईको यो समृद्धिको संवाहक प्रदेश टुडे राष्ट्रिय दैनिकलाई पनि धेरै–धेरै धन्यवाद दिन्छु ।
दाङका सबै मस्जिदको अनुगमन